Meramec ရှိလမ်းဘေးပရိဘောဂအသစ်• Dutchtown CID •ဒတ်ခ်ျတောင်းရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်
အပေါ် Posted ဇူလိုင်လ 29th, 2020
အဆိုပါ Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင် အဆိုပါစဉ်အတွင်းအင်္ဂါနေ့တွင် Meramec လမ်းတလျှောက်တွင်လမ်းဘေးပရိဘောဂအသစ်ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် နွေရာသီမိတ်ဆက်ပွဲဖြစ်ရပ်၏အရိပ်။ အရောင်အသွေးစုံလင်သောအရောင်များရှိသောစားပွဲများ၊ ကုလားထိုင်များနှင့်ထီးများသည် Downtown Dutchtown သို့အရောင်များစွာသယ်ဆောင်လာသည်။
ပါ ၀ င်သည့်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များသည်ပရိဘောဂများကိုသူတို့ဖွင့်သောအခါသတ်မှတ်ပြီးပိတ်သောအခါ၎င်းကိုဖြုတ်ပါလိမ့်မည်။ ပရိဘောဂများတပ်ဆင်ထားခြင်းသည်အာရုံကိုဆွဲဆောင်သွားလိမ့်မည်။ လမ်းလျှောက်သွားသူကိုအားပေးလိမ့်မည်။ Dutchtown သည်စီးပွားရေးအတွက်ဖွင့်နိုင်သည်ဟုကြေငြာလိမ့်မည်။
Shades of Summer ပွဲသို့တက်ရောက်သူများသည်အားရစရာကောင်းသည့်နမူနာများကိုလည်းရရှိကြသည် Juanita's Creole Soul ကဖေး, pies & အံ့သြစရာနှင့် Pasုံ pastryUrban Eats Food Hall ရှိအိမ်ငှားအသစ်သုံး ဦး ။ Juanita's Creole Soul ကဖေးနှင့် Pies & Surprise တို့ကသူတို့အတွက်ဖြစ်သည် စနေနေ့, သြဂုတ်လ 1 ရက်နေ့တွင်ခမ်းနားဖွင့်လှစ်။ Pasုံ Pastry တရားဝင်ကျဆုံးခြင်းအတွက်ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်နေပါတယ်။
at ည့်သည်များလည်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသောစတိုးအသွင်အပြင်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည် Tawakal ဟလာလ်စတိုး 3308 Meramec မှာ။ Dutchtown CID နှင့်ဒီဇိုင်နာများ Sara Schipkowski၊ Michael Jones နှင့် Vanessa McBride တို့၏အကူအညီဖြင့်စတိုးဆိုင်ကိုဆိုင်းဘုတ်အသစ်၊ ပြတင်းပေါက်မြင်ကွင်းများနှင့်တံခါးအသစ်တစ်ခုနှင့်အသစ်ပြုပြင်လိုက်သည်။ CID သည်ခရိုင်တစ်လျှောက်လုံးတွင်စတိုးအသွင်အပြင်အသစ်များနှင့်ကူညီရန်စီစဉ်ထားသည်။
Downtown Dutchtown မှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အချိန်ပါပဲ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များနှင့်အယူအဆသစ်များသည် Meramec လမ်းသို့ရောက်ရှိလာကြသည်။ The UrbanMain Initiative, အကြားပူးပေါင်း DT2 • Downtown Dutchtown နှင့် မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှု, ရပ်ကွက်အတွင်းများအတွက်တောက်ပသောအနာဂတ်ဆက်လက်။ Downtown Dutchtown တွင်ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုလာရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။
အောက်မှာ Filed CID သတင်း. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. CID သတင်း, DT2, ဒိန်းမတ်, Dutchtown CIDနှင့် UrbanMain. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် သြဂုတ်လ 2nd, 2020 .
ဒိန်းမတ် CID သတင်း Meramec အပေါ်လမ်းဘေးပရိဘောဂအသစ်